Budada Anastrozole (120511-73-1) Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshadda
Cudurka dabaysha waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo kansarka naasaha dumarka ka dib dhalmo-dayska. Kansarka naasaha qaarkood ayaa loo sameeyaa si ay u koraan si dhakhso ah hormoon dabiici ah oo loo yaqaan estrogen. Buufiska ayaa hoos u dhigta qiyaasta estrogen ee jidhku sameeyo oo wuxuu ka caawiyaa in uu gaabiyo ama dib ugu noqdo koritaanka kansarka naasaha.
Qalabka Cagaarka ah (120511-73-1)
Macdanta cagaarka ah ee loo yaqaan "Anastrozole" (120511-73-1)
Kalluunka cagaarka ah ee macdanta leh, magaca caanka ah waa Arimidex. Waxaa loo isticmaalaa daaweynta kale, sida qalliinka ama shucaaca, si loogu daaweeyo kansarka naasaha hore ee haweenka soo maray caadada (caadada), isbedelka nolosha, dhammaadka caadada caadada ah. Dawadan waxaa sidoo kale loo isticmaalaa dumarka, kuwaas oo soo maray miyir-qabad, sida daaweynta ugu horeysa ee kansarka naasaha oo ku faafay naaska ama meelaha kale ee jirka. Daawadan ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu daaweeyo kansarka naasaha dumarka kuwaas oo kansarka naasku ka sii daraya ka dib marka la qaato tamoxifen (Nolvadex). Budada Caanaha Anastrozole waxay ku jirtaa fasalka daawooyinka loo yaqaan 'aromaticase nontooidal inhibitor'. Waxay ku shaqaysaa hoos u dhigista qiyaasta estrogen ee jirka ka dhigaya. Tani waxay gaabin kartaa ama joojin kartaa koritaanka noocyo badan oo ah unugyada kansarka naaska ee u baahan in ay koraan.
Kareemka Root Anastrozole waa xayawaan aan saliid lahayn ee aromatase inhibitor ah oo lagu tilmaamay daaweynta kansarka naasaha oo sii kordhay haweenka ka dib haweenka qaba menopausal oo la socota cudurka soo socda daaweynta tamoxifen. Kansarrada naasaha badankood waxay leeyihiin qabtayaasha estrogen iyo koritaanka burooyinkan waxaa lagu kicin karaa estrogens. Dumarka postpausal ka dib, ilaha ugu muhiimsan ee wareegga xinjirta (estradiol) ayaa ah beddelidda adrenally-produced androstenedione si ay u dhisto by aromatase ee unugyada peripheral, sida unugyada adipose, oo leh beddelaad dheeraad ah estrone ilaa estradiol. Kansarka naasaha badankooduna waxa ku jira aromatase; muxuu muhiim u yahay estrogens-tumor abuuray lama hubo. Daaweynta kansarka naasuhu waxay ku jirtaa dadaal lagu yareeynayo heerarka estrogen by premenopausal iyo u adeegsiga anti-estrogens iyo walxaha hormoodka ah labadaba kahor iyo ka dambeeya menopausally, iyo waxqabadyadani waxay horseedi karaan hoos udhaca burqashada ama dib u dhac ku yimaada koritaanka burooyinka ee haweenka qaarkood. Kalluunka cagaarka ah ee "Rout Anastrozole" waa xayawaan aan saliid lahayn oo aan saliid lahayn. Waxay si aad ah hoos ugu dhigeysaa xaddiga serum estradiol mana laha wax saameyn ah oo lagu ogaan karo sameynta corticosteroids adrenal ama aldosterone.
Budada caanaha lagu dubo (120511-73-1) Smamnuucista
Product Name Kalluunka Cagaarka ah
Magaca Kiimikada ICI-D-1033;ARIMIDEX;1-[3,5-DI-(1-METHYL-1-CYANO)-ETHYL]-BENZYL-1,2,4-TRIAZOLE, Anastrozol
Fasalka Daroogada aromaticase aan lahayn steroids steroidal
Molecular Wsideed 293.374 g / mol
Monoisotopic Mass 293.164 g / mol
barafku Psaliid 130.14 ° C
Biological Life-Life saacadood 50
milmi xajinta biyaha 0.5 mg / mL
kaydinta Temperature RT
Application Wixii daaweyn ah oo lagu daaweynayo kansarka naasaha ee hormoonka naasaha, iyo sidoo kale daaweynta hoormoonka daaweynta kansarka naasaha ee dumarka dumarka ka dambeeya. Waxaa sidoo kale loo isticmaalay in lagu daaweeyo qanjirada 'gertomemia' iyo 'McCune-Albright syndrome'.
Waa maxay budada caanaha loo yaqaan "Raw Anastrozole" (120511-73-1)?
Anastrozole waa unteroidal inhibitor of aromatase kaas oo si firfircoon u xaddidaya synthogen synthesis ee haweenka postmenopausal waxaana loo isticmaalaa daaweyn lagu sameeyo kansarka naaska naasaha ee estrogen. Anastrozole ayaa lala xiriiriyay heerarka hooseeya ee heerarka serum enzym ee inta lagu jiro daweynta iyo dhacdooyin dhif ah oo ka mid ah dhaawacyada kalyaha ee muuqda.
Sidee budada loo yaqaan 'Anastrozole Root' (120511-73-1) shuqullada
Qalabka "Anastrozole" wuxuu u shaqeeyaa hoos u dhigista xaddiga estrogen ee jirka.
Kansarka naasaha qaarkood ayaa lagu dhiirigeliyaa inay koraan hormoonka hormoonka. Kuwani waxaa loo yaqaan 'estrogen receptor positive' ama kansarka naasaha 'ER +'.
Qalabka "Anastrozole" waxaa iska leh koox daawooyinka loo yaqaan 'aromatase inhibitor'.
Dufanka qamriga cagaaran (120511-73-1)
Qiyaasta ARIMIDEX waa hal kiniini 1 mg kiniin ah hal mar maalintii. Bukaanka qaba kansarka naasaha oo sii sarreysa, ARIMIDEX waa in la sii wadi doonaa ilaa uu sii kordho bukaanka. ARIMIDEX waa la qaadan karaa ama cunto la'aan.
Daaweynta lagu daaweeyo kansarka naasaha hore ee dumarka postmenopausal, mudada ugu habboon ee daaweynta lama garanayo. Dacwadda ATAC, ARIMIDEX ayaa la maamulay muddo shan sano ah.
Isbeddelka qiyaasta daaweynta lagama maarmaanka u ah bukaanka qaba naafonimada kelyaha ama bukaanka waayeelka ah.
Budada Cagaarka ah ee loo yaqaan "Anastrozole" (120511-73-1) faa'iidooyinka
Daraasada ATAC waxay ogaatay in sanadka 5 ee Arimidex uu ka fiican yahay sanadka 5 ee tamoxifen oo ah hormoonka daaweynta hormoon ee hore ee dumarka postmenopausal leh horey marxaladda, kansarka naasaha hormoonka ah ee hormoonka ah. Arimidex wuu ka fiican yahay tamoxifen:
* Kordhinta waqtiga ka hor inta kansarku ku soo laaban kuwa ku soo noqda soo noqoshada
* Yaraynta halista kansarka ku faafaya qaybaha kale ee jirka
Waxaad ka iibsataa budada Anastrozole (120511-73-1) Buyaas.com